xuquuqda jinsi iyo aqoonsiga | khayraadka LGBT ka USAHello | USAHello
dadka jinsi badanaa rabto in aad beddesho kaarka aqoonsiga ama laysanka darawalka marka ay bedesho jinsi. In qaar ka mid ah dalalka, waxaad xaq u leedahay sharci in arrintan loo sameeyo. Baro oo ku saabsan xuquuqda transgender iyo beddelo shahaadada aqoonsiga iyo dhalashada.
dadka Trans iska leh jinsiga ah oo aan u dhigmin jinsi ah ay ku dhalatay. dadka Trans laga yaabo in aqoonsiga (ID) kaararka, diiwaanada maaliyadeed iyo caafimaadka, iyo waraaqaha kale ee aan u dhigma muuqashadii. Tani waxay ka dhigi kartaa nolosha adag. dadka Trans waxaa lagaa codsan karaa haddii ay "been" ama "iska" xaaladaha guud. Taas aawadeed, dad badan oo trans doortaan in ay magacooda iyo galmada beddeli ay ID.
xuquuqda Trans sheeg gobolka
Gobol kasta wuxuu leeyahay sharciyo u gaar ah oo ku saabsan xuquuqda trans. Xuquuqdaas ayaa weli laga beddelo ama lagu qeexay in meelo badan oo. Qaar ka mid ah dalalka aynu dadka trans beddelo shahaadada dhalashada iyo ID. Qaar ka mid ah ma samayn. Waxaad ka eegi kartaa a khariidada shows in xuquuqda trans gobolka.
Qaar ka mid ah dalalka loo ilaaliyo dadka trans takoorka. Takoorka waa marka qof ayaa la daryeelin si cadaalad ah sababta oo ah aqoonsiga. dalalka kale ee aan haysan sharciga takoorka.
Sida loo beddelo shahaadada dhalashada
hay'adaha intooda badan in IDs arrin aan u baahnayn cadeyn u tahay in aad bedelay jinsigaaga marayo qaliin. Tan waxaa ku jira Mareykanka State, oo arrimaha baasaboorada iyo waraaqaha dhalashada. halkii, waxaad yeelan doontaa in ay bixiyaan cadeyn u tahay in aad lahayd daaweyn caafimaad si aad u bilowdaan guurka. Tani waxaa ka mid ah therapy hormone ama qalliin in aad bedesho weji. Waxaad caddeyn ka takhtarkaaga ka heli kartaa. Markaas aad awoodid bartaan sida loo beddelo shahaadada dhalashada.
Sidee in aad bedesho ID
Dadka qaarkiis waxay doorbidaan in ay bedesho magaca ay ID. Tallaabada ugu horreysa waa in aad buuxiso codsi la maxkamadaha. (Codsi waa dokumenti in hoorsato isbedel). Tani waxay badanaa la samayn karaa online. Waxaad buuxin doontaa foomamka oo ku saabsan magacaaga isbedel iyo u dib u fiiriyo xaakin ah. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad tagto maxkamada si hadal ah oo ku saabsan sababta aad u rabto in aad beddesho magacaada. Marxaladani waxay qaadan kartaa saddex bilood ama ka badan.
Marka laguu ogolaado, waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto xafiiska nooc kasta oo ID si gooni gooni ah. Tusaale ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto Waaxda Gaadiidka in la beddelo liisanka darawalnimada. sida caadiga ah aad u baahan tahay in ay bixiyaan lacag si ay bedesho magacaaga mar kasta oo. Tani waxay ku kacaysaa kartaa boqolaal doolar.
Way adkaan kartaa in la fahmo xuquuqda ID kala duwan iyo baahida. Lambda Legal iyo Xarunta Qaranka ee Labeeb Equality ku siin kara qalabka iyo macluumaadka aad u baahan tahay.
xuquuqda Daryeelka Caafimaadka
Dhammaan dadka transgender leeyihiin qaar ka mid ah xuquuqda daryeelka caafimaadka aasaasiga ah.
qof ama meel Marka aan u adeegin qof maxaa yeelay, iyagu waa kuwa iskaga gudba, inay tahay takoorid. Dhakhaatiirta iyo isbitaallada ma takoori karo. Iyagu ma ay baad u celin kartaa sababtoo ah waxaad tahay trans. Waxay sidoo kale ma kugu qasbi kara inaad hesho nidaamka aadan rabin.
dadka jinsi xaq u leedahay inaad u gaarka ah. Haddii aad tahay trans, diiwaanada caafimaad iyo aqoonsiga jinsiga yihiin gaarka ah. Qarsoodiga waa eray in sidoo kale loo isticmaalaa. Tani waxay ka dhigan tahay in aan cidna la wadaagi karaan macluumaadka adiga oo aan ogolaansho. Waxaad weydiin kartaa dhakhaatiirta ma inaad qoyskaaga wadaagaan aqoonsigaaga, shaqadaada, aad dugsiga, iyo qof kasta oo kale. Haddii aad tagto cusbitaalka ama xarumaha caafimaadka, waxaad weydiisan kartaa dhakhtarkaaga in aan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee ay wadaagaan aqoonsigaaga.
Shirkadaha caymisku ma aad diidi kartaa caymiska, maxaa yeelay, waxaad tahay trans. sharciga dalka taageertaa dadka trans codsada caymiska. Laakiin aan aad loogu balan qaadayo caymiska, maxaa yeelay, waxaad tahay trans. Shirkadaha ma kuu sheegi karaan sababo kale.
Shirkadaha caymisku waxay leeyihiin si ay u daboosho adeegyada aasaasiga ah, Waxba ma ahan wixii aad jinsiga waa. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof dumar ah transgender, iyagu ma dhihi karo ma jiro nidaamka ah in uu yahay "waayo, dadkii." shirkadaha caymiska ma aha inay cover therapy hormone ama qalliin jinsiga adkaynaya. Laakiin dadka qaba Medicare waxaa loo ogol yahay in aad dalbato hormoonnada iyo qalliin jinsiga. Waad awoodaa akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan caymiska, takoorka, iyo sida loo soo gudbisid ashtako.